Ulingisa efilimini entsha owaduma kwiSibaya
UMICHELLE Mosalakae, uzolingisa indawo kaRachel efilimini esihloko sithi Silverton Siege Isithombe:FACEBOOK
USHAYELA phezulu kulezi zinsuku umlingisi owaduma kwiSibaya neThe Queen, uMichelle Mosalakae. UMichelle uboshelwe nabanye abalingisi efilimini ethi Silverton Siege.
Kule filimi ezoqala ukukhonjiswa kwiNetflix kusukela ngoLwesithathu, uMichelle (27) ulingisa indawo kaRachel. Eziphawulela, uMichelle uthe kusho lukhulu kuyena ukudlala efilimini ekhuluma ngomlando wakuleli.
UMichelle uphawule ngefilimu: "Yizindaba ezisemqoka kabi nezisikhumbuza ukuthi bungakanani ubuhlungu esiphuma kubo, ngesikhathi silwela inkululeko yethu njengabantu baseNingizimu Afrika. Sihlonipha uStephen Mafoko, Humphrey Makhubo noWilfred Madela nemindeni yabo, ngalolu daba futhi sikhumbula isibindi namandla abo okubamba iqhaza kwinkululeko yesizwe."
UMICHELLE Mosalakae olingisa indawo kaRachel efilimini esihloko entsha iSilverton Siege Isithombe:FACEBOOK
UMichelle ubonge abeNetflix nethimba lonke ngomsebenzi omushe abawenzile efilimini.
"Siyabonga ngokweseka nokubona ukubaluleka kokuxoxa ngezindaba zabantu bendabuko e-Afrika, emazweni awu-195 emhlabeni jikelele. Ngibonga wonke umuntu okhombise uthando ekwenzeni ifilimu ibe yiqiniso. Ngithobeke kakhulu ngokusebenza nabalingisi abasezingeni elicokeme. Sengikujahe kabi ukuba nonke nizibonele ngawenu lo msebenzi ngo-Ephreli 27," kuphetha uMichelle odabuka eMabopane, ePretoria.
Le ntokazi eyayidlala indawo kaZakithi kwiSibaya nekaKamina kwiThe Queen. Ikhono likaMichelle lagqama kakhulu kwiSibaya kangangoba waze waqokwa kumunxa weRising Star kuma-2017 DStv Mzansi Viewers' Choice Awards.
Kuthe ngoMashi 2018, yena noBontle Modiselle, Kim Jayde noLuthando "Loot Love" Shosha, baqokwa ukuthi babe ngamanxusa akwaRevlon. Lokho kwenza waqopha umlando ngokuba ngusaziwayo wokuqala onebala elimhlophe, ukuba yinxusa lalo mkhiqizo osezingeni lomhlaba.
Ngokulingisa indawo eqavile emdlalweni weshashalazi osihloko sithi Shoes and Coups, uMichelle waqokwa kumaNaledi Theatre Awards ngoMashi 2019.
Uma engekho kwithelevishini usuke eqondisa imidlalo yeshashalazi njengoba eneziqu zeHonours emkhakheni wokulingisa, owokuqondisa nowe-drama, azizuza eRhodes University, eGrahamstown. Waphothula uGrade 12 esikoleni iSt Mary's Diocesan, ePretoria.